“Aar Qoyey Dacawo la mood Jubaland Maaha Taadmooday” – KHAATUMO NEWS
“Aar Qoyey Dacawo la mood Jubaland Maaha Taadmooday”
Waxaa Meel xaasaasi ah maraya xaalada doorashada jubaland oo ah abid doorashadii ugu xaasaasi saneed ee ka dhacda gudaha dalka soomaaliya,
Doorashada Jubaland waxaa isku haya Dawlado la kala safan Madaxweyne Axmed Madoobe iyo Madaxaweyne Farmaajo.
Madaxweynaha soomaaliya oo dhawr mar ay ugashay isku dayo uu ku riday madax maamul goboleed ayaa isku daygii uu ku tijaabiyay jubaland waxaa uu kala kulmay wax uusan filayn oo u qaadan waayay,“”Aar Qoyey Dacawo la mood””
MD Farmaajo Ayaa hore Xilka si qasab ah uga qaaday Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan iyo madaxweynaha Galmudug Xaaf.
Farmaajo oo sidii caadada u ahayd u midiyo Lisanaya Islamarkaana ay Haysato Maahmaadii ahayd “Dawaco meeshay Macal ku baratay Macaluul ugu Dhimata ayaa isku Dayay Jubaland isagoo damaciisu ahaa ka taqaluska Axmed Madoobe,
Markay Halkaasi xaajo marayso Warka Farmaajana Cad yahay Ayay Ugu horeen Jubaland waxaa ay xayirtay Cidkasta oo kamid ah Fadaraalka gaar ahaan garabka nabad iyo nolol kana mamnuucday inay soo caga dhigan Kismaayo.
Intaa wixii xigay Waxaa uu Farmaao bilaabay Adeegsiga Beesha caalamka taliyaasha amisom safiiro, Saraakiil ciidan oo itoobiyan ah isagoo dhaman Xubnaha Caalamka ee u adeegsanaayo uga Jeeda in lagu Baqdin galiyo Axmed Madoobe Balse taas Maysan suuro galin oo axmed Madoobe Waxaa uu helay Saaxiibo Siyaasadeed Gaar ahaan Dalalka Kenya iyo Imaaraadka.
Halkaasi markay Xaajo marayso Farmaajo iyo Xulifadii Itoobiyaanka ahayd Waxaa ay La kulmen Oo Arken In Axmed Madoobe Dhanka Siyaasada Haysto Dalal Dhaqaalo iyo ciidanba la Dul taagan Islamarkana dhanka Dagaalka Laftiisa uu haysto Ciidan Uu gaar oo u leeyhay oo Aad ugu Heelan Difaaca Jubaland Taaso Ka dhigan”” Amxaaro madax gumac galay leedahaye madax hadal galo ma laha‘ Oo Ka dhigan Axmed Madoobe Amxaarada Farmaajo wato Waxaa uu Diyaar Ula yahay Dagaal taaso meesha ka saartay in Ay Soo Dagdagto Amxaaradu,
Isku Soowada duubo Doorashada Madaxweynaha Jubaland Waxaa inaga Xiga oo kaliya Hal Maalin waxaana jirta Cabsi Xoogan Oo Xukumada Farmaajo Ka qabto Soo Labashada Axmed Madoobe oo Fashil weyn ku ah Nabad iyo Nolol Islamarkaana Meesha Ka saarasa Hammi badan iyo Awood Badan oo ay usheegten Shacabka soomaaliyeed
Previous Post: Deg Deg:Axmed Karaash Oo Ku Dhawaaqay War Naxdin Galiyay SNM iyo Deni.
Next Post: Deg Deg Daawo::Dagaalkii Sanaag iyo Hubka Laga Qabsaday Somaliland,